यिनै रहेछन कैलालीमा अर्जुन दासको ज्या’न लि’ने युवकहरु ? (भिडियो सहित) – Nep Stok
यिनै रहेछन कैलालीमा अर्जुन दासको ज्या’न लि’ने युवकहरु ? (भिडियो सहित)
पुष ६, २०७८ मंगलबार 1261
धनगढी: शनिबार कैलालीमा मृ’त अवस्था फे’ला परेका अर्जुन दास’को श’व उठाइएको छ। जानकी गाउँपालिका–९ का २५ वर्षीय दास’को श’व परिवारले उठाएका हुन्। उनको श’व अमरावति सामुदायिक वनमा फे’ला परेको थियो। प्रहरीले ह’ ‘त्या’को आ’शं का’मा एक जनालाई प’क्राउ गरिसकेको छ।
उनको ज्या’न लि’ने अपराधीहरु अहिलेसम्म नसमातिएको बताउँदै प्रहरी प्रशासनलाई द’बा’ब दिन ललित परियारको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाइएको छ।
समितिले ४ बुँदे माग राख्दै संघर्षका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। दासका परिवारले दो’षी’लाई कार’बाही र पी’डि’त परिवार’लाई क्ष’तिपूर्ति’को माग गरेका छन्।
दासको ह’ ‘त्यापछि एउटा अडियो बाहिरिएको थियो। घटना दुई युवाबीच भएको फोन रेकर्ड बाहिरिएपछि फोनमा भएको कुराकानीको आधारमा प्रहरीले अनु’सन्धा’न अगाडि बढाएको छ।
दास सामान्य आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति हुन्। उनको गाउँमा कसैसँग पनि दु’श्म’नी थिएन। उनका बुवा, आमा र दाइ भारतमा रोजगारीका लागि बस्दै आएका छन्। घरमा उनका पत्नी, छोरी र भाउजू थिए। जंगलमा घाँस का’ट्न’ गएका महिला’ले श’व देखेर प्रहरीलाई खबर गरेपछि घटना बाहिर आएको हो।
घट’नास्थलमा चाउचाउका खोस्टा र ट्या’ब्लेटसमेत फेला परेकाले सबै जना सहमतिमै जंगल पुगेको र वि’वा’द हुँदा यो घ’टना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। मृ’तक’को घरबाट घ’टनास्थल डेढ किलोमिटरको दूरीमा छ।
जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरी भने प्रहरी प्रशासन कमजोर बनेकै कारण दिनहुँ जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा अपराधका घ’टना बढिरहको बताउँछन्। उनले प्रहरी प्रशासन’ले सु’रक्षाको प्र’त्याभूति नदिलाउँदा यस्ता घ’टना दोहोरिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
Prevअन्ततः ४ दिनपछि अर्जुनको ला’स य’सरी लगियो, ज’ब’र्ज’स्ती ला’स उ’ठाउन खोज्दा पर्यो ल’फ’डा (भिडियो)
Nextफेरी दोहोरियो जाजरकोट जस्तै घटना ! ठकुरीकी छोरी विवाह गरेका कारण २० वर्षका चन्द्रेलाई ?